सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ३ महीनामै शिवम् सिमेण्ट्सको लाभांश | गृहपृष्ठ
Home लगानी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ३ महीनामै शिवम् सिमेण्ट्सको लाभांश
on: ९ बैशाख २०७६, सोमबार १७:५३ लगानी
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । गत फागुनमा सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ विक्री गरेको शिवम् सिमेण्ट्स लिमिटेडले तीन महीनामै लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले सोमवार तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी गत वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुका लागि १५.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव पारित गरेको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई आईपीओ विक्री गरी संकलित रकम उपयोग नै नगरी लाभांश दिन लागेकोमा लगानीकर्ताहरुले खुुसी व्यक्त गरेका छन् ।
पहिलो वर्षनै १५ प्रतिशत बढी लाभांश दिएको कम्पनीले आगामी दिनमा यसलाई नघटाई बोनस र नगदको नीति अपनाएर लाभांश दिन लगानीकर्ताहरुले सुझाब दिएका छन् । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई समेत समेटेर पहिलो पटक वार्षिक साधारण सभा गरेकाले सर्वसाधारणले कम्पनीप्रति धेरै आशा अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
उत्पादन मुलक क्षेत्रका अन्य राम्रा कम्पनीहरुले दिएको लाभांशको उदाहरण दिदै लगानीकर्ताहरले शिवम् बाट पनि आगामी दिनमै सोही बमोजिमको लाभांशको आशा राखेका हुन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट अमृतनाथ रेग्मी, डम्बरु बल्लब घिमिरे, शिवप्रसाद पौडेल, ब्यास कुमार शर्मा, इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ, सत्रुघन श्रेष्ठ, उत्तम लामा, कृष्ण प्रसाद अधिकारी, चन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ, रोक कुमार शर्मा लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
शेयरधनीहरुको सुझाव तथा जिज्ञासालाई कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार गोयलले प्रष्ट पारेका थिए । उनले शिवम् सिमेण्टले लगानीकर्ताहरुको माग बमोजिम आगामी वर्ष लाभांश दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । शिवममा सर्वसाधारण जनताको लगानीलाई समेत उपयोग गरी राष्ट्रिय ब्राण्डको रूपमा स्थापित गर्न कम्पनीले पहल गर्ने अध्यक्ष गोयलले जानकारी दिए ।
तेस्रो वार्षिक साधारण सभामार्फत सर्वसाधारण तर्फबाट अल्का गोयल आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन् । नवनिर्वाचित सदस्य गोयलले आगामी दिनमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि समितिमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
विक्रम संवत् २०६० साल जेठ १३ गते प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत दर्ता भएको यस कम्पनी विक्रम सम्बत् २०७२ साल साउन ८ गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो । यस कम्पनी प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा नगरपालिका वडा नम्बर १६ हडियामा अन्याधुनिक जर्मत प्रविधियुक्त प्लाण्ट एण्ड मेसिनरी जडिट क्लिंकर तथा सिमेण्ट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गरेको कम्पनी हो । यस कम्पनीले नेपाल सरकार उद्योग विभागबाट प्रतिदिन ३ हजार मेट्रिक टन सिमेण्ट र ३ हजार मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ ।
प्रतिदिन कम्पनीले ३ हजार मेट्रिक टन शिवम् सिमेन्ट र शिवम् सिमेण्ट ब्राण्डको ओपिसि सिमेण्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, १ हजार ९०० मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गरी सिमेण्ट उत्पादन गर्ने तथा अपुग क्लिंकर आयात तथा खरीद गरी आपुर्ति गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले गत वर्षको अन्त्यसम्ममा रू. १ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ७५ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा करीब ४१ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै सिमेन्ट विक्रीबाट ३९ दशमलव ४० प्रतिशत गत वर्ष आम्दानी गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको अत्यसम्म कम्पनीले सिमेण्ट विक्रीबाट रू. १० अर्ब २६ करोड ५० लाख ६४ हजार आम्दानी गरेको उल्लेख छ ।
सर्वसाधारणलाई समेत समटेपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब ४० करोड कायम भएको छ । कम्पनीले ओपिसि सिमेण्टमा फोकस गरी चालू वर्षमा ओपिसि मै अर्को नयाँ ब्राण्ड शिवम् प्लस सिमेण्ट समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आगामी दिनमा आउन सक्ने बजारको मागलाई ध्यानमा राखी कम्पनीले पिपिसि, स्लाग सिमेण्ट लगायतका अन्य विभिन्न ब्राण्ड र ग्रेडका सिमेण्ट उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने योजना बताएको छ ।